China 187ml Antique Green Glass Burgundy Bottle maka Wine, Mmụọ, Tonics Manufacturer and Supplier | Changyou
187ml Antique Green Glass Burgundy Bottle maka Wine, Mmụọ, Tonics
Anyị 187ml Antique Green Glass Bordundy Bottle bụ nke zuru oke maka otu mmanya mmanya. A na-eji obere karama mmanya a dị ntakịrị karama mmanya na-enweghị ihe ọ bụla ma dị dị ka otu karama ma ọ bụ nwere ihe mkpuchi aluminom. Sitụle karama a na-enyere aka ịkwalite ahịa nke mmanya na mmụọ gị, dịka ọkwa tozuru etozu na-eme ka ndị ahịa gị doo anya. Ihe eji achọ mma ma kpochapụwo mara mma na-enye gị ogo kachasị mma na okomoko na ọnụ ala.
Obere obere mmanya mmanya ndị a zuru oke maka… ị chepụtara ya, mmanya! Agbanyeghị, enwere ike iji ya maka ọtụtụ ebumnuche. O zuru oke ma nwee mmụọ, tonics, cordials, flavorings, vinegar, oil & ọtụtụ ndị ọzọ! N'agbanyeghị ọdịnaya, ọ na-enye gị ọkachamara ma karama onwe gị iji nye ndị ahịa gị. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe nke aka gị n'ụlọ, yana ihe ndị dị ka mmụọ a wụnyere ma ọ bụ mmanya a na-eme n'ụlọ, ha na-eme kalama zuru oke iji nye onyinye.
Nwere ike ịnụ ụtọ akụnụba akụ na ụba na oge na-eweta agbụ n'agbanyeghi ogo iji. Anyị na-adụ ndị ahịa niile ọdụ ka ha debe iwu nnwale tupu ha etinye nnukwu akwụkwọ. Nke a ga - ahụ na nkwakọ ngwaahịa anyị na - egbo ihe ị chọrọ tupu etinye nnukwu ego. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara obere karama mmanya anyị, biko kpọtụrụ ndị ọrụ ndị ahịa anyị.
Obere karama mmanya na-abaghị uru zuru oke maka ụlọ ọrụ dịka ndị na-emepụta mmanya, ndị na-emepụta ihe ọ drinksụ drinksụ, ile ọbịa, njikwa ihe omume, onyinye ụlọ ọrụ na ọtụtụ ndị ọzọ. N'agbanyeghị ihe ndị ị chọrọ, ị ga-ahụ karama kachasị mma na ọnụahịa dị ala karịa na iko Changyou.
Aha ngwaahịa 187ml Burgundy kalama
Ike Obosara 1873
Agba Ochie Green ma ọ bụ Ọchịchịrị Green
Cap / mkpuchi Ịghasa okpu
Ngwaahia ODM / OEM, anyị nwekwara ike ibipụta logo na karama site silk scree, na-ekpo ọkụ zọ electroplating wdg
MOQ 100,000 PC
Maka ihe ntanye, anyị nwere ike ịhazi mbupu ahụ n'otu izu.
Maka ngwaahịa na ngwaahịa, ọ na-achọkarị ihe dị ka 30 ~ 40days, mana ọ ga-adabere na oke nke cutomer
Mbupu Site n'ikuku, oké osimiri, awara awara wdg
Nke gara aga: 150ml tomato mado ketchup hot sauce 5 oz woozy kalama with cap and shrink band
Osote: 1oz 2oz 3oz 50ml 100ml amba-acha anụnụ anụnụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ doro anya na-acha uhie uhie na mmanụ na-acha uhie uhie
Iko Karaga Burgundy
N'ogbe 700ml 750ml kanye mmezi flint rọm ...
China emeputa 100ml 200ml 250ml 300ml 375ml ...
Emeputa N'ogbe 30ml 50ml 60ml 75ml 100m ...
China factory fashionable imewe soplaya Ion P ...
750ml karama mmụọ
China emeputa N'ogbe 200ml 375ml 500ml ...